5 talo oo ku saabsan sida lagu helo tikidhada diyaaraha oo raqiis ah - iftineducation.com
5 talo oo ku saabsan sida lagu helo tikidhada diyaaraha oo raqiis ah
aadan21 / June 5, 2016
iftineducation.com – Iyadoo hada uu bilaabanayo xili fasaxeedka Yurub ayaa talooyin la waydiiyay 10 ka mid ah shaqaalaha shirkadaha jara tikidhada diyaaradaha waxay bixiyeen talooyin ku saabsan sida lagu helo tikidhada oo raqiis ah. Halkaan ayaan ku soo koobayaa taladooda.
1. Tikitka gooso 21 maalmood ka hor safarkaaga. Haddii aad tikitka jarato waqti aad u horeeya ayaa taasi keeni kartaa in aad waydo qiimo dhimista ay sameeyaan diyaaradaha balse haddii aad jarato xili dambe taasi ay keeni kartaa in qiimaha tikidhada ay aad kor ugu kacaan, shaqaalaha diyaaradaha ayaa isku raacay in ay haboontahay 21 maalmood ka hor safarka in aad goosato, qaasatan haddii safarkaaga uu yahay mid gudaha ah.
2. Maalinta Talaadada ayaa tikidhada ugu raqiisanyihiin. Maalmaha talaadada iyo arbacada ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin kuwa ugu buuqa yar ayroboorada isla markaana ay tikidhada ugu raqiisanyihiin. Shirkadaha diyaaradaha ayaa sidoo kale la sheegay in ay cusboonaysiinyaan qiimaha maalmahaan. Sidoo kale waxaa fiican in aad duusho maalmaha talaadada iyo arbacada maadaama uu yaryahay buuqa ayroboorada.
3. Gooso xili hore safarada dibada: Haddii aad u safrayso wadamada kale waxaa haboon in aad tikidhada goosato xili hore, qaasatan 2 bilood ka hor inta aadan bixin.
4. Ugu dambeyntii, haddii aad dhowr jeer raadisay tikidhada oo aad booqatay websiteyada shirkadaha diyaaradaha waxaa fiican in aad nadiifiso kombutarkaaga (Cookies) maadaama laga yaabo in websiteka shirkadaha diyaaradaha ay ku xasuustaan oo sidaas darteed ay kugu qaaliyeeyaan tikidhada.
5. Isticmaal websiteyada isbarbar dhiga tikidhada sida Flygresor oo kale kuwaasoo kuu soo bandhigaya qiimaha tikidhada ee shirkadaha kala duwan.
daawo ciyaartoy gabar naaska ka qabtay ma xishoode kkkkk
xariif gabar xoog hab kusiiyay kuna shuumiya kamirada horteeda daawo